နှစ်​​ပေါင်း ၇၀ ကြာမှ super moon မြင်​ရမယ်​၊ ငလျင်​နဲ့ ဆူနာမီ အန္တရာယ်​ရှိ | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»နှစ်​​ပေါင်း ၇၀ ကြာမှ super moon မြင်​ရမယ်​၊ ငလျင်​နဲ့ ဆူနာမီ အန္တရာယ်​ရှိ	Leaveacomment
နှစ်​​ပေါင်း ၇၀ ကြာမှ super moon မြင်​ရမယ်​၊ ငလျင်​နဲ့ ဆူနာမီ အန္တရာယ်​ရှိ	Posted by danyawadi on November 5, 2016 in သတင်းများ, ဆောင်းပါးများ	နှစ်ပေါင်း (၇၀)အတွင်း တကြိမ်သာ မြင်တွေ့ ရမယ့် ကြီးမားတဲ့ လပြည့်ဝန်း supermoon ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ငလျင်နဲ့ ဒီရေလှိုင်း ကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်
BEC CREW 3NOV 2016
နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ မှာ ကမ္ဘာတ၀န်း မြင်တွေ့ ကြရ မယ့် supermoon လ ဖြစ်စဉ်ဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ တကြိမ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေနဲ့ လအနီးဆုံး ဖြစ်ပြီး လရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ပိုကြီးပြီး တောက်ပ နေတာကို မြင်ရမှာပါ။
လနဲ့ ကမ္ဘာမြေအကွာအဝေးဟာ (၂၄၀၀၀၀) မိုင်ဖြစ်ပြီး ယခုမြင်ရမယ့် လက မိုင် ၃၀၀၀၀ (30,000 miles) အကွာထိ ကမ္ဘာနဲ့ အနီးဆုံး ရောက်လာမယ်လို့နာဆာ NASA အဖွဲ့ ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပင်လယ်ဒီရေလှိုင်း အတက်အကျဟာ လရဲဆွဲအား ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာဆို တော့ ကမ္ဘာနဲ့နီးလာတဲ့ လဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းလုံးကြီးတွေ နဲ့ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့Tokyo ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိူ မှ သုတေ သီတွေက ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်နေကြပါတယ်။
သုတေသီ တွေထောက်ပြထားတာက ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ငလျင် ၁၂ ကြိမ်မှာ (၉)ကြိမ်ဟာ ဆူပါ မွန်း ဖြစ်စဉ်ကြောင့်လို့ ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။
အင်ဒို ငလျင် Indonesia in 2004,(magnitude 9.1 Sumatra ) ပြင်းအား ၉.၁ မက်နိကျူ့ ချီလီနိုင်ငံလျင် Chile in 2010 (The magnitude 8.8)ပြင်းအား ၈.၈ မက်နိကျူ့နဲ့and ဂျပန် ငလျင် Japan in 2011. ပြင်းအား ၉ မက်နိ ကျူ့magnitude 9.0 (Mw)။
ခုလို လ ဖြစ်စဉ်ကို (25 November2034.)
နောက် (၁၈)နှစ်ကြာမှ ထပ်တွေ့ ရမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Biggest Supermoon by By Lily Waddell
>> Zin Moe
← ဂျပန်မှ ပေးသည့် ယန်း ဘီလီယံ ၈၀၀ မှ ၄၀ ဘီလီယံ ကို ရိုဟင်ဂျာများ အတွက် သုံးစွဲမည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြော ကြားခဲ့	The Authenticity of “Rohingya Identity” →